Ihe niile ịchọrọ ịma iji mepụta ekwentị na-aga nke ọma | Akụkọ akụrụngwa
Mee ngosi site na otu ụlọ ọrụ ekwentị na onye ọzọ Ọ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-eme site n'oge ruo n'oge, na ebumnuche nke ịnweta onyinye ndị ka mma anyị nwere ugbu a, ma ọ bụ n'ihe gbasara ọrụ ma ọ bụ n'ihe metụtara ụgwọ anyị na-akwụ kwa ọnwa. Ọ naghị abụkarị usoro mgbagwoju anya, mana ọ dị mkpa ịnwe ọtụtụ ihe doro anya ka ihe niile wee daa na ọdịda dara ada.
Maka ihe a niile, taa anyị ga-enye gị n'isiokwu a 5 atụmatụ maka ịga nke ọma ekwentị portability na-enweghị imehie ihe, nke a na-ekwesịghị ime mgbe ịmalite usoro nke ụdị a. Ọ bụrụ na ị na-eche ịgbanwe ụlọ ọrụ ekwentị gị, lezienụ anya n'ihi na ihe anyị ga-agwa gị taa nwere mmasị dị ukwuu nye gị ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ị beụ mmanya na-enweghị nsogbu ma ọ bụ nsogbu nwere ike ịkwụsị gị euro ole na ole .
1 Lelee ụlọ ọrụ gị nyere
2 Buru n'uche nkwa enwere ike
3 Lego anya na oge ịkwụsị gị
4 Nyochaa onyinye gị nke ọma
5 Nwee ndidi ma ghara imechi ya na band
6 Nkwupụta site n'echiche
Lelee ụlọ ọrụ gị nyere
Tupu ịmalite njem nke ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe Ọ dị mkpa ka ị nyochaa onyinye ndị ụlọ ọrụ gị ugbu a nwere ike inwe. N'ọtụtụ oge, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na-arịọ ka ebugharị na-ebughị ụzọ chọpụta ihe ụlọ ọrụ ha nọ ugbu a na-enye ha, yana ebe ha nwere ọnọdụ ka mma karịa ndị ha nwere ugbu a.
Iji mee nke a, ị nwere ike ịkpọ ngalaba ọrụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla wee gwa ha maka ọkwa ma ọ bụ onyinye ọ bụla ị nwere ike ịnweta. I nwekwara ike ịchọpụta n’otu n’ime ọtụtụ ụlọ ahịa ndị ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na-agbasasị n’obodo ọ bụla.
Ọ dịkwa mkpa ka ị buru n'uche mgbe niile na ọnụahịa ahụ bụ ihe dị ezigbo mkpa, mana ịnwe ọrụ ziri ezi nke na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu dị mkpa. Ikekwe ụlọ ọrụ ga-enye gị oku na-akparaghị ókè na ọtụtụ gigabytes ịnyagharịa, maka ọnụahịa ihere, mana ọ ga-abaghị uru ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ adịghị mma ma ọ bụ ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ịnweghị mkpuchi na mpaghara gị.
Ejila ụgwọ ma ọ bụ otu ọrụ eburu gị, mgbe ọ bụghị ihe ị chọrọ ma ọ bụ na ị ga-adaba n'ime njehie bụ isi nke ndị ọrụ; mkpebi mmanye ahụ gbara ọsọ na-enweghị iche echiche.
N'ikpeazụ, buru n'uche na tupu ị hapụ ụlọ ọrụ gị ugbu a, ọ ga-akpọ gị usoro nnyefe amalitelarị ịme gị onyinye dị mma. Echegbula na usoro ahụ amalitela, ebe ọ bụ na anyị ga-akọwa ma emesịa ị na-anọkarị oge iji kagbuo ebugharị gị.
Buru n'uche nkwa enwere ike
Tupu ịmalite ịrịọ ka onye ọrụ ọzọ nwee ọrụ ọ dị mkpa, n'ọnọdụ niile, ka ịlele ma ọ bụrụ na ịnweghị nkwa ọ bụla ịnọnyere ụlọ ọrụ gị ugbu a. Iji ohere a e nyere gị, ime ndebanye aha ọhụrụ ma ọ bụ inweta ngwaọrụ mkpanaka site n'ịkwụ ya n'ụgwọ nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere ị ga-eji zụta ọnụnọ.
Ọ bụrụ na ikpebie ịga ụlọ ọrụ ọzọ na ntinye aka n'ike, ụlọ ọrụ gị ugbu a ga-akwụ gị ụgwọ maka nkwa ahụ, nke ụfọdụ nwere ike ịba uru dị oke mkpa. Ọ bụrụ n’ikpebie ịgakwuru onye ọrụ ekwentị ọzọ maka esemokwu euro ole na ole, inwe ego ịkwụ ụgwọ nwere ike ibibi ngwa ngwa ndị ahụ ị zubere.
Ọ dịkwa mkpa na ịmara na ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ maka ama ma ọ bụ mbadamba na obere nkeji na ụlọ ọrụ gị ugbu a, nke a agaghị ahapụ gị ka ị gaa n'ihu na-akwụ ya ụgwọ obere na ihe omume ịchọrọ ịwepụta ọrụ. Ọ bụrụ na ịhapụ ụlọ ọrụ na akwụkwọ ọnụahịa ọzọ ị nwetara, ị ga-ahụ otu esi akwụ ụgwọ ego ọnụahịa niile ị kwụrụ ụgwọ. Mgbe ụfọdụ, ha nwedịrị ike ịkwụ gị ụgwọ ụfọdụ njikwa njikwa metụtara na ịkagbu nke ịkwụ ụgwọ na nkeji nke nkeji nke ọnụ a.
Lego anya na oge ịkwụsị gị
N'oge na-adịghị anya gara aga, usoro mmeghari maka ọtụtụ ụbọchị ma site na mmalite nke usoro mgbanwe na ụlọ ọrụ ọzọ, ọ nwere ike were izu ole na ole ruo mgbe anyị nwere akara dị na ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ. N'oge a ọ na-ewe naanị awa ole na ole ka anyị nwee akara ọrụ na ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ.
Maka ihe a niile ọ dị ezigbo mkpa iji nlezianya nyochaa oge ịkwụsị gị. Ọtụtụ mgbe, ebe ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ rịọrọ ka e nye ya eriri site na nke ochie, awa 48 ga-agabiga ka e wee mechie usoro a, mana n'ọnọdụ ụfọdụ ọ nwere ike bụrụ obere.
Dị ka ndị ọrụ, anyị ga-amarịrị na ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị ga-enye anyị ntụaka ụbọchị maka mgbanwe nke ahịrị, nke a ga-akpọ windo mgbanwe. Bọchị ahụ ga-abụ mgbe a ga - arụ ọrụ n'ahịrị na ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ. Agbanyeghị, n'adịghịkwa ka ọtụtụ ndị ọrụ kwenyere, ike ịkagbu obere njem ga-akwụsị ụbọchị tupu windo mgbanwe ahụ na elekere 14:00 nke ehihie. n'ihe gbasara ekwentị mkpanaaka.
Nke a bụ otu ihe ahụ maka ụlọ ọrụ niile, yabụ ọ bụrụ na ịnwe ma nyochaa ma na-achịkwa windo mgbanwe, ị ga-ama oge niile oge ị ga-akagbu ọrụ gị.
Ọ bụrụ na enwere ike ibugharị ya na ngwugwu ọrụ nke gụnyere, dịka ọmụmaatụ, Internetntanetị na ekwentị ekwentị, ozi gbasara akara ekwentị, mana gbasara akara ala, ihe niile gbanwere ntakịrị, na-adịwanye mgbagwoju anya.
Nyochaa onyinye gị nke ọma
Mgbe anyị nọ ụlọ ọrụ ogologo oge anyị nwere ike ịsị na anyị nwere ihe niile edobere, anyị maara ihe anyị na-akwụ kwa ọnwa na ọnwa na ihe kpatara ụlọ ọrụ anyị ji akwụ anyị otu ego ma ọ bụ ọzọ. Mgbanwe nke onye ọrụ ọzọ pụtara ịmalite site na ncha na onyinye ọhụrụ anyị ga-enyocha nke ọma ka anyị wee ghara ịchọta ihe ijuanya na akwụkwọ ọnụahịa mbụ.
Ọ baghị uru ikwu ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị na-enye anyị ọnọdụ ọhụrụ anyị na akwụkwọ na ederede, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ oge, igodo ahụ na-arụ ọrụ site na ekwentị yana ihe egwu dị na nke a. Amaara m na a na-edekọ mkparịta ụka mgbe niile, mana mgbe a na-ekwu maka ha, ha efuola ma ọ bụ na ha adịghị.
Mgbe obula inabatara onyinye ohuru, choro ma obu nkwekorita nke nyere onyinye ma, karia ihe nile, nyochaa ya nke oma izere ihe itu n'anya.
Nwee ndidi ma ghara imechi ya na band
Ndụmọdụ a bụ maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ahịa ka mma ma ọ bụ kwụọ obere ụgwọ ha kwa ọnwa. Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ị na-achọ ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ maka ihe ọ bụla, ọ dị mkpa iji mezuo ebugharị, nke a abụghị maka gị, ndụmọdụ kachasị mma anyị nwere ike inye gị bụ ịrịọ mgbanwe ahụ ma gbanyụọ ekwentị maka ụbọchị ole na ole.
N'ihi na nke mbụ na-ebu portability naỌ dị mkpa ka ị nwee ndidi, gee ntị nke ọma ma wetuo obi mee mkpebi. Ozugbo usoro nnyefe amalitela, debe ekwentị gị ezigbo nso, ma ghara ịdị nso na band n'agbanyeghị na ịmechiela nkwekọrịta gị na onye ọrụ ọhụụ. Cheta na ị na-mgbe oge iji kagbuo obere ibugharị enweghị mmerụ ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ gị.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-arịọ mgbanwe maka onye ọrụ ekwentị mkpanaaka ọzọ ma kwụsị usoro ahụ. Companylọ ọrụ ị nọ na-eme ka ị bụrụ onyinye ga-enyere gị aka ịnọnyere ha, yabụ ị kwesịrị ige ya ntị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnabata ya ozugbo enwere ike. Banye na onye ọrụ ọzọ abaghị uru ọ bụla, ọ bụ na ruo mgbe ọrụ ahụ arụchabeghị, ị ga-anọrịrị oge ịnọ n'ụlọ ọrụ ị nọ.
Nkwupụta site n'echiche
Ofwa nke ekwentị mkpanaka bụ azụmahịa, ebe dịka onye ọrụ ị ga-amarịrị ka esi egwu kaadị gị ka ị nwere ike. Site na ndụmọdụ ndị a anyị nyere gị taa, ọ ga-ekwe omume na ị nwere ike igwu ha ntakịrị, mana cheta na ị kwesịrị ịnwe okwu ikpeazụ na mkpebi ikpeazụ dabere na ozi enyere gị.
Kpebie nwayọ ma nyochaa onyinye niile na ohere ọ bụla ị ga-eme tupu ị banye n'ime ọdọ mmiri ahụ. Ma ọ bụ na ozugbo ịmalite, ị nwere ike ịnweghị ngwọta. Tụkwasị na nke a, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ịghara inwe nkwa ịnọ, ma ọ bụrụ na ị na-eme, ịmaba n'ime ọdọ mmiri ahụ ga-apụta ịnọ ogologo oge n'ime ya, ma ọ bụrụ na mmiri adịghị na ya, nsogbu ahụ nwere ike buru oke ibu.
Kedu ihe bụ ahụmahụ gị mgbe ị na-ebufe ekwentị site na ụlọ ọrụ gaa na nke ọzọ?. Gwa anyị gbasara ha na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na otu netwọkụ mmekọrịta ebe anyị nọ ma na-achọsi ike ịkparịta ụka ma soro gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe niile ị chọrọ ịma iji mepụta ekwentị na-aga nke ọma
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na Google zụtara Telegram